अध्यक्षमा कसले मार्ला बाजी ? – Khabar Silo
अध्यक्षमा कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष पद खाली भएसँगै अकांक्षीहरूले लबिङ सुरु गरेका छन् । मंसिर २९ गते तत्कालीन बहालवाला अध्यक्ष केशव भट्टराईको निधन भएसँगै खाली भएको पदमा आकांक्षीहरूले नियुक्तिका लागि लबिङ थालेका हुन् ।
चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था बोर्डमा रिक्त अध्यक्ष पदमा आकांक्षा देखाउनेमा निर्देशक दयाराम दाहाल, नायक भुवन केसी, राजेश हमाल, नवल खड्का, निर्देशक तथा कलाकार लय संग्रौला, आकाश अधिकारी र निर्देशक केपी पाठक छन् ।दयाराम दाहाल अध्यक्षका बलिया प्रतिस्पर्धीमध्ये एक हुन् । उनी अध्यक्षका आकांक्षीमध्ये सबैभन्दा बलियो प्रतिस्पर्धी भएको स्रोतको दाबी छ । उनी सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाका गृहजिल्लाका हुन् भने चुनावमा सहयोग गरेर गुन पनि लगाएका छन् ।
दाहाल अहिले बुबाको निधन भएर १३ दिनको किरियामा बसेका छन् । सञ्चारमन्त्रीले उनैलाई चाहेको स्रोतले जनाएको छ । आफूलाई चुनावमा लगाएको गुनलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाएर चुक्ता गर्ने सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको योजना रहेको स्रोतको दाबी छ । सोही कारण दाहालको बुबाको १३ दिनको काम नसकिएसम्म आवेदन आह्वान नगर्ने सरकारको तयारी रहेको स्रोत बताउँछ । दाहाल बोर्डका वर्तमान सदस्य पनि हुन् ।
भुवन केसी पनि अध्यक्षको दौडमा छन् । तत्कालीन एमालेनिकट भुवन नेकपाका नेता माधव नेपालनिकट मानिन्छन् । संविधानसभामा सभासदका रूपमा जान चर्को लबिङ गरेका उनी अहिले अध्यक्षको दौडमा छन् । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सञ्चारमन्त्री बास्कोटासँग लबिङका लागि सीधा पहुँच राख्छन् ।
बोर्ड अध्यक्षका अर्का आकांक्षी हुन् अभिनेता राजेश हमाल । उनले पनि अध्यक्षका लागि आकांक्षा देखाएका छन् । उच्च बौद्धिक अभिनेताको छवि बनाएका राजेश पनि यतिबेला लबिङमा जुटेका छन् । उनी पनि प्रधानामन्त्री र मन्त्रीसँग सीधै पहुँच राख्ने भएकाले लबिङका लागि सहज छ । उनले चलचित्रमा अभिनय नगरेको लामो समय भयो । ‘को बन्छ करोडपति’ होस्ट उनी अहिले स्टेज कार्यक्रममै व्यस्त छन् ।
नवल खड्काले पनि आफूलाई अध्यक्षको प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तत्कालीन माओवादीनिकट खड्काले सरकार–माओवादी द्वन्द्वको विषयमा चलचित्र बनाएका थिए । उनका चलचित्र माओवादी आन्दोलनको पक्षमा देखिने गरेका छन् । लय संग्रौलाले पनि अध्यक्षका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । दर्जनौं टेलिशृंखला निर्देशन गरेका उनी आफूलाई अध्यक्ष बनाउन दौडधूप गरिरहेका छन् ।
निर्देशक आकाश अधिकारी र केपी पाठक पनि अध्यक्षको दौडमा छन् । चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारी निर्माता संघको नेतृत्वको अनुभवले पनि आफू बोर्डको अध्यक्षका लागि योग्य रहेको भन्दै लबिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ । केपी पाठक पनि अध्यक्षको दौडमा रहेका अर्का आकांक्षी हुन् । पाठक भने चलचित्र महोत्सव निफको आयोजनामा लागेकाले दौडधूप तीव्र बनाउन भने सकेका छैनन् ।
उच्च रक्तचाप र सुगरका बिरामी केशव भट्टराईको हृदयाघातका कारण नियुक्ति पाएको ९ महिनामा निधन भएको थियो । दुईवर्षे कार्यकालका लागि सरकारले उनलाई गत चैतमा नियुक्त गरेको थियो ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा बक्स अफिस लागु गर्न सुरु गरेका थिए । उनकै पालामा चलचित्र ऐनको ड्राफ्ट तयार भएको थियो । काठमाडौंको आसपासमा इनडोर फिल्म स्टुडियो निर्माणका लागि सरकारको वार्षिक आय–व्यय (बजेट भाषण) मा रकम छुट्याउन लगाएका थिए ।
काठमाडौं। हिन्दूहरूको पर्व दिपावलीलाई पत्रकार रबि लामिछानेले सेलिब्रेसन गरेका छन् । रबि ले आफ्नो घरमा परिवारका साथ तिहार मनाएका हुन् । सबै नेपालिले माया गरेर रबि दाई भनेपनि आफु परिवारको कान्छो भएको भन्दै आफ्नो फेसबुकमा फोटो राखेका छन् । सम्पूर्ण नेपालीहरुमा भाईटिकाको शुभकामना दिदै लेखेका छन् – ‘धेरैले मया गरेर “रबि दाइ” भनेपनि म चाहिँ […]
काठमाडौं । चर्चित हाँस्यटेलिसिरियल ‘सक्किगो नि’ मा बले पात्रको भुमिका निभाउँदै आएका हाँस्यकलाकार सागर लम्साल क्षेत्रीको आज शुभ जन्मदिन परेको छ । उनको जन्म स्याङ्जा जिल्लाको बिरुवा नगरपालिकामा बुबा राजेन्द्र लम्साल र आमा शशी लम्सालको कोखबाट भएको हो । ‘सक्किगो नि’ टेलिसिरियल सँगै म्युजिक भिडियोमा ब्यस्त रहेका सागर लम्सालको पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा प्रेम चर्चा […]
नेपालमा दक्षिण भारतीय सिनेमाको आफ्नै किसिमको लोकप्रियता छ। विशेषगरी ती सिनेमाको लोकप्रियतालाई भिडिओ संजाल यूट्यूबमा देख्न सकिन्छ।दक्षिण भारतका विभिन्न क्षेत्रिय भाषाका सिनेमाको हिन्दी डब संस्करणले अनेक काण्ड शीर्षकधारी भिडिओको नेपाल ट्रेन्डिङलाई पन्छाउँदै एक नम्बरमा पर्ने गरेको अवस्थाबाट ती सिनेमाहरुको लोकप्रियता बुझ्न सकिन्छ। साता-दश दिन हुन थालिसकेको छ ‘डियर कमरेड’ नामक सिनेमा नेपाल ट्रेन्डिङमा कब्जा जमाएर […]
सभामुख उम्मेदवारका लागि कांग्रेसले अग्नि सापकोटाविरूद्ध पुष्पा भुषाललाई उठाउने